Fisorohana ady Afrikana iray hafa – Fandinihana blaogy mikasika ilay fifandirana Etiopiana-Eritireàna · Global Voices teny Malagasy
Fisorohana ady Afrikana iray hafa – Fandinihana blaogy mikasika ilay fifandirana Etiopiana-Eritireàna
Voadika ny 25 Septambra 2018 5:23 GMT
Raha toa ka nihaona tamin'ity faran'ny herinandro ity tao Abuja, renivohitr'i Nizeria, ireo Afrikana mpitarika fito mba hiresahana mikasika ny fomba entina hampandrosoana ny kaontinantany, namory tafika teny amin'ny sisintaniny kosa i Etiopia sy Eritrea. Anisan'ireo mpitarika tonga nivory tao Abuja ny Praiminisitra etiopiana Meles Zenawi. Ahiana mafy ny hisian'ny ady eo amin'i Etiopia sy Eritrea. Samy niady mafy ny roa tonta taorian'ny fifandirana momba ny sisintany teo anelanelan'ny taona 1998 ka hatramin'ny 2000 izay nampizana aina an'arivony maro. ‘Nanelanelana’ azy ireo ny Fikambanan'ny Firaisambe Afrikana (OUA) sy ny Firenena Mikambana ary nosoniavina tamin'ny 12 Desambra 2002 ny fifanarahana fandriampahalemana, enina volana taorian'ny fanekena fampitsaharana ady. Noforonina ny Kaomisiona Sisintany Etiopiana-Eritireàna ary nekena ny tolokeviny ary napetraky ny Filankevi-Pilaminan'ny FirenenaMikambana ho tsy maintsy arahana tamin'ny 13 aprily 2002.
Toa mbola fiahiahiana no fijery amin'ny ankapobeny manjaka ao amin'ny tontolon'ny blaogy mikasika ny antony mety hiadian'i Etiopia amin'i Eritrea. Nanazava tsara ny Ethiopundit, ohatra, fa ”tsy misy fanamarinana mihitsy handatsahana rà, hatsembohana na ranomaso na iray tete aza, raha ny amin'izay mety ho tsy fitovianevitra eo amin'ny roa tonta.” Mahita izany ho toy ny fampiesonana avy amin'ny andaniny roa ity farany. Mila ny fijerin'ireo Tandrefana ny fanjakana Eritreàna, hoy izy, ”satria lasa simba ary miatrika fanoherana anaty izay tena mihamitombo be izy amin'izao fotoana izao.” Ny fanjakana Etiopiana kosa etsy ankilany dia te-hanodina ny sain'ireo Tandrefana tsy ho amin'ny firodanan'ny endrika ivelan'ny demokrasia (misy ifandraisany amin”ny fifidianana etiopiana natao tamin'ny Mey 2005, izay tena niadian'ny mpanohitra mafy mihitsy ny mikasika ny fahamarinany).
Miresaka momba ny fifandirana Etiopiana-Eritreàna ihany koa ny Greg's Africa Thoughts, ilay blaogin'i Greg Fischer, misionera kristiana monina ao Entebbe, Ogandà. Hoy izy:
” Isantaona, manao fitsidihana maro ao amin'ny faritra ifampizaran'i Etiopia sy Eritrea sisintany iraisana aho. Imbetsaka henoko ny ‘boom-boom’ any lavidavitra avy aminà fitaovampiadiana mavesatra, avy tao amin'ny efitranon'ny hotely nipetrahako. Matetika sehatra ahitana fiaramanidina mandaroka baomba mivoaka mankany Eritrea eo amin'ny seranam-piaramanidina. ”
Toa sahiran-tsaina mafy mikasika ny famoretana ataon'ny fanjakana Eritireàna an'ireo kristiana evanjelika ihany koa i Greg Fisher.
Ny African Bullets and Honey, ao anatina lahatsoratra nosoratan'i Akinyi Arunga , izay vao haingana no tao Addis Ababa, dia miresaka mikasika ny:
“…natahotra mafy ilay vehivavy tanora izay voasambotra ny anadahiny [noho ny fidirana an-tsehatra teny an-dalambe nanoherana ny fanjakana ankehitriny], hoe mety ho fanerena azy handeha handray anjara amin'ny ady no saziny raha toa ka mipoaka ny ady eo amin'i Etiopia sy Eritrea, toa hita mitombo isanandro isanandro ny mety hitrangany. Nolazainy tamiko fa mitomany isanandro ny reniny, matahotra ny ratsy indrindra ho an'ny zanany…”
Ao amin'ny ankamaroan'ny blaogy Etiopiana nidirako tao amin'ny tontolon'ny blaogy, toa tsy misy mpanohana ny fanjakan'ny Praiminisitra Meles Zenawi mihitsy. Manohy ny manaraka akaiky ilay fifandirana misy eo amin'ny Etiopia sy Eritrea ihany koa ny fampahalalam-baovao mahazatra. Amin'izao aloha, tokony hanantena isika fa hitroatra ny feon'ny rariny ary ho afaka ny hamaha ny adiny amin'ny fomba milamina ny fanjakan'i Etiopia sy Eritrea, amin'ny fanarahana ny fanapahankevitry ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana
24 ora izayNizeria